फोल्डेबल फोनहरू पहिले भन्दा धेरै जीवित छन् ग्याजेट समाचार
फ्लिप फोनहरू पहिले भन्दा बढी जीवित छन्
यदि तपाईं यस ठाउँको सब भन्दा पुरानो हो, र कहिले काँही शेल वा फोल्डिंग फोन तपाईंको हातहरू मार्फत गएको छ भने, निश्चित रूपमा हरेक पटक यस प्रकारको नयाँ फोन घोषणा गरिन्छ। तपाइँले महसुस गर्नुभएको भावनालाई तपाइँले सम्झना गर्नुहुनेछ प्रत्येक चोटि तपाईंले कल प्राप्त गर्न वा ह्या hang्ग अप गर्न प्रयोग गर्नुभयो। ताली! यो राम्रो थियो।
एशिया लाखौं प्रयोगकर्ताहरूको बजार हो, र फोल्डि phones फोनहरू अझै पनि दिनको क्रम हो, भौतिक कुञ्जी बिना स्मार्टफोन जत्तिकै होइन, तर तिनीहरूको बजारको महत्त्वपूर्ण हिस्सा छ। सामसुलाई यो थाँहा छ र समय - समयमा नयाँ मोडल सुरू गर्दछ। आज हामी सैमसंग फोल्डर २ को बारेमा कुरा गर्छौं.
स्यामसंग फोल्डर २, एक फोल्डिंग फोन हो, सानो2इन्च स्क्रीन प्रदान गर्दैन। यो द्वारा व्यवस्थापन गरिएको छ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 425२1,4 प्रोसेसर चार कोरका साथ १.2 घगाहर्ट्जमा, २ जीबी र्यामको साथ। पर्दाको तल मात्र यसले हामीलाई चार समर्पित बटनहरू प्रदान गर्दछ जुन हामी क्यामेरा खोल्न, एक पाठ सन्देश पठाउन, प्राप्त ईमेलहरू जाँच गर्न र कल गर्न सम्पर्कहरू खोल्न सक्दछौं।
उपकरण भित्र हामी १ 16 जीबी भण्डारण र १, 1.950 .० mAh ब्याट्री पाउँछौं। फ्रन्ट क्यामेरा m mpx छ जबकि पछाडिको एक m mpx हो। को स्क्रिन रिजोलुसन 800 × 480 हो र एन्ड्रोइड मार्शमेलो द्वारा संचालित हो। यस टर्मिनलको मूल्य जुन बजारमा पहिले नै छ विनिमय दरमा करिब २ 240० यूरो हो।
तर यदि तपाइँ यसलाई पक्रन चाहानुहुन्छ, तपाईंसँग मात्र विकल्प छ एशियाई देशहरूमा यात्रा जहाँ यो उपलब्ध छ, यी बाहेकको माग माग यति कम छ कि कम्पनीलाई यो क्षेत्र बाहिर बिक्री गर्न भाँडामा दिदैन। सामसु्गले यस टर्मिनललाई संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रस्ताव गर्दछ, जहाँ यस प्रकारको टर्मिनलको फेशन मोटोरोला रजरलाई अत्यन्तै कडा धन्यवाद थियो, बजारमा हिटकेक जस्तो बेच्ने उपकरण, त्यसैले यदि तपाइँ त्यहाँ यात्रा गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने। तपाईं यो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » टेलिफोनी » मोबाईलहरू » फ्लिप फोनहरू पहिले भन्दा बढी जीवित छन्
गेमा लोपेज भन्यो
यदि हाहााहा…? तर कसले ती मध्ये 1 मध्ये 10 प्रयोग गर्दछ कि शान्त ???
Gema Lopez लाई जवाफ दिनुहोस्
फेसबुक सामग्री भिडियो सिर्जना गर्न नयाँ अनुप्रयोग सुरू गर्नेछ
अमेजन - जून २०१ 2017 मा हप्ताको शीर्ष सौदाहरू